Ifektri Engokwezifiso | I-China Abenzi Bamafulegi Ngokwezifiso nabahlinzeki
Izibhengezo Zangokwezifiso Eziphrintekayo Ezi-Duplex
Amabhanela wesiko aphrintiwe aphindaphindiwe aqinisekisa ukuthi ujabulela umphumela wokuphrinta wokungena we-100%. Ngenkathi ukuphrinta okuphindwe kabili, izindwangu ezisezingeni eliphakeme nama-inki wokuphrinta zamukelwa ukuqinisekisa umbala ogqamile futhi ophilayo.
Iphrintiwe ngomfanekiso ocacile futhi onempilo, isibhengezo sangokwezifiso siyindlela engcono kakhulu yokuthola ukunakwa okuvela kumakhasimende angaba khona. Ifulegi ngalinye langokwezifiso lingenziwa ngokuya ngemidwebo yakho nezimo zakho. Ifulegi lethu langokwezifiso nakanjani liyindlela enhle yokwenza ukukhushulwa kwakho kuvelele!